Iyadoo maalinimadii shalay Askar ka tirsan Ciidamada Itoobiyaanka Fal Toogasho ah ay ka gaysteen Magaalada Beled Weyne ayaa waxaa arrintaa ka hadlay Guddoomiyaha Maamulka dawladda ee Gobolka Hiiraan.
Cabdi Faarax laqanyo Guddoomiyaha Maamulka Dawladda federaalka Soomaaliya ee Gobolkaas ayaa sheegay in wax si aad ah looga xumaado ay tahay Falkii toogasho ee Shalay ka dhacay Masjid ku yaala magaalada Beled Weyne Toogashadaas oo uu ku dhintay Hal Ruux oo Rayid ah halka Seddax kalena ay ku dhaawacmeen.
Laqanyo ayaa sheegay in aysan ka harayn isla markaana ay baarayaan Toogashadii Askarta Itoobiyaanku ay ka gaysteen Masjidka xilli halkaa loo joogay Salaadda khudbada Jimcaha Mudane Laqanyo ayaa hoosta ka xarriiqay in aysan garanayn sababta keentay in Dad u taagan Salaad Rasaas la isaga furo isagoona sheegay in arrintaas ay u marayaan Dariiq kasta oo xitaa heer Caalami gaarsiisan.
In ka Badan Labataan Sano Kaddib Hay’adda IMF oo Oggolaatay Xubinimada Soomaaliya.
Go’aan ka soo baxay Xafiiska hay’adda Lacagaha Adduunka ee IMF ayaa lagu aqoonsaday Xubinimada Soomaaliya oo muddo Laba iyo labaatan Sano ka maqneyd Xubinimada Hay’addaas. Go’aankan ayaa lagu sheegay in Hay’addu aqbashay in Soomaaliya ay dib ugu soo noqoto Xubinimadii Hay’adda Lacagaha adduunka ee IMF
Go’aankan ka soo baxay IMF ayaa lagu sheegay in Soomaaliya xiligan aan la amaahineyn wax lacaga ah iyadoo taasina loo aaneeyay Lacagaha lagu leeyahay Soomaaliya oo gaaraya illa Sedax Boqol iyo Konton Milyan oo Doolar. Go’aanka ayaa xusay in Soomaaliya looga fadhiyo in ay bixiso Lacagahaas lagu leeyahay intaas kaddibna loo Oggolaan doono in la siiyo Lacago kale oo Ammaah ah.
Arrintan ayaa waxaa ka hadlay Guddoomiyaha bangiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo sheegay in ay socdaan wada hadalo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Xafiiskaas. Hadliye ayaa intaa ku daray in Bangigu haatan ka shaqaynayo sidii Soomaaliya looga cafin lahaa ama looga saamixi lahaa Lacagahaas Deymanka ah ee hore loogu lahaa Soomaaliya.
Somaaliland oo sheegtey in aysan Gorgortan ka geli Doonin Gooni isku Taagooda .
Iyadoo dalka Turkigu ay ku kulmeen Madaxweynaha dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynaha Maamulka SomaliLand ayaa arrimahaas waxaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somali land Maxamed Cabdullaahi Cumar.
Wasiirka arrimaha Dibadda SomaliLand oo ka mid ah Xubnaha shirkaas ka qayb galaya ayaa sheegay in arrimaha laga hadlayo ay ka mid yihiin sii socoshada Shirkii labada dhinac kal hore ay ku yeesheen Magaalada Londdon. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa sheegay in shirarka labada Dal ay yihiin kuwo sii socon doono taasoo suurta gal ah ayuu yiri in ay qaataan muddo dheer.
Wasiirka ayaa farta ku fiiqay in wada hadalada labada dhinac ay u dhacayaan qaab laba Dal sida Jamhuuriyadda Somali land iyo Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Mar uu ka hadlayay shirka Bisha soo socota ka furmaya Magaalada Londdon iyo aragtidooda ayuu sheegay Mr Cumar in Shirkaasi mowqifkooda ay hore uga dhiibteen haatana uu ku celinayo Mowqifka Soomaali Land ee Shirkaas.
Wasiirka arrimaha Dibadda ee Soomaali Land ayaa sheegay inaysan Shirkaasi ka qayb galayn sababtuna ay tahay in aanay waxba ka khuseyn Somali land shirkaas oo sida uu sheegay u gooni ah Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa sheegay in shirkaas looga hadlayo dib u habaynta Ammaanka Soomaaliya iyo ka hadalka iyo la xisaabtanka Deeqaha Soomaaliya la siiyo.